အတာသင်္ကြန်ကို 5BB ရဲ့ အင်တာနက် Promotion Plan နဲ့ကျော်ဖြတ်ရင်းအပန်းဖြေကြမယ်
4 Apr 2019 . 10:05 PM
ကယ်…သိပ်မကြာခင် သင်္ကြန်ကျတော့မယ်၊ ပရိသတ်ကြီးရော ဘယ်လိုဖြတ်သန်းဖို့ စိတ်ကူးထားကျလဲ? နေ့ခင်းမှာ ရေဆော့၊ လျှောက်လည်ပြီး ညဖက်အနားယူတဲ့အချိန်ကျရင် ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ ဂိမ်းကစားရင်း ကျော်ဖြတ်ကျမလား? ဒီအစီစဉ်ကသိပ်ကောင်းတယ်နော်၊ အနှောက်ယှက်လည်းမရှိ အပြည့်ဝအပန်းဖြေနိုင်မယ့် အိုင်ဒီယာလေး…
Image (Wallpaper Access)
အခုချိန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ Netflix လည်းရနေပြီဆိုတော့ နာမည်ကျော် ရုပ်သံစီးရီးတွေကို Full HD Resolution အပြည့်နဲ့ Live Stream ကြည့်နိုင်ပြီ။ ဒါမှမဟုတ် အိမ်က PS4 ကို 4K TV နဲ့ချိတ်ပြီး အွန်လိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူပစ်မလား? အင်တာနက်ကို မိသားစုတွေနဲ့အတူ ဝေမျှအသုံးပြုရင်း မြန်ဆန်တဲ့ Fiber ကွန်ယက်အသုံးပြုချင်နေတယ်ဆိုရင် 5BB က သင်္ကြန် Promotion လေးရှိပါတယ်။ အစီစဉ်လေးတွေက အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
6 Months Advanced Pay (1 Month Free)
၆ လစာ လစဉ်ကြေး ကြိုပေးပြီး ၀ယ်မယ်ဆိုရင် ကနဦးတပ်ဆင်ခ အခမဲ့ နှင့် 1 month Deposit ကို လုံးဝပေးဆောင်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အထူး Promotion လက်ဆောင် အနေဖြင့်လည်း (၁) လ အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်လည်း ခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Speed နှင့် ဈေးနှုန်းများမှာ
XXS+ : 10Mbps (40,000Ks)
XS : 16Mbps (49,500Ks)
XS+ : 26Mbps (72,000Ks)
S : 45Mbps (99,500Ks)
M : 70Mbps (149,500Ks)
L : 100Mbps (249,500Ks)
XL : 200Mbps (449,500Ks)
3 Months Advanced Pay (No Deposit)
၃ လစာ လစဉ်ကြေး ကြိုပေးပြီး ၀ယ်ယူလိုတဲ့ Customer များအနေနဲ့ ကနဦးတပ်ဆင်ခ – 40,000Ks သာပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး Speed နဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကတော့
Monthly Pay (6 Months Contract)
လစဉ်ကြေး တစ်လချင်းသွင်း (၆ လစာချုပ်ဖြင့်) ၀ယ်ယူလိုတဲ့ Customer များအနေနဲ့ ကနဦးတပ်ဆင်ခ – 40,000Ks နှင့် One Month Deposit ကိုပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး
မြန်နှုန်း နှင့် ဈေးနှုန်း များမှာ
Monthly Pay (No Contract)
လစဉ်ကြေး တစ်လချင်းသွင်းပြီး (စာချုပ်ရန်မလို) ၀ယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကနဦးတပ်ဆင်ခ – 40,000Ks နှင့် One Month Deposit ကိုပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး Speed နဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကတော့
XXS+ : 6Mbps (40,000Ks)
XS : 10Mbps (49,500Ks)
XS+ : 20Mbps (72,000Ks)
S : 26Mbps (99,500Ks)
M : 38Mbps (149,500Ks)
L : 60Mbps (249,500Ks)
XL : 100Mbps (449,500Ks)
၀ယ်ယူပြီး တပ်ဆင်ချိန်ကလည်း ( ၃ ) ရက်အတွင်းဆိုတော့ အမြန်ဆုံး ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။